[Tuesday, October 3rd, 17] :: Dowladda Soomaaliya oo $50 milyan ka heshay Sucuudiga, Booqashadii Farmaajo ka dib
Muqdisho (RH) War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre in uu Boqortooyada Sucuudiga uga mahadceliyey taageerada joogtada ah ee dib u dhiska Soomaaliya iyo sida joogtada ah ee uu u taageerto.
War-saxaafadeedka ayaa lagu caddeeyay in boqortooyada Sucuudiga ay ugu deeqday Soomaaliya, lacag gaareyso $50 milyan oo dollar.
“Waxaan si kal iyo laab ah uga mahadcelineynaa Boqortooyada Sacuudiga oo waqtigan baahida loo qabo noogu deeqday 50 milyan oo dollar si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed, taasoo muujineysa sida dalka aan wallaalaha nahay ee boqortooyada Sacuudiga ay u daneynayso ka qeybqaadashada dib u dhiska dalkeena.” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Si kastaba, Deeqdan waxay imaanaysaa xilli Soomaaliya ay ka jirto uu xiisad siyaasadeed oo ku aadan maamullada oo diidan mowqifka dowladda ay ka qaadatay Khilaafka waddamada Khaliijka.